DOWNLOAD လေကြောင်းဖလက်ချာ FU24 950 စီးရီး FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 33.6 ကို MB
downloads ရယူရန္ 18 493
23 / 06 / 2019 အပေါ် Updated: ဗားရှင်း 3
သဟဇာတ 24 မှဖလက်ချာ FU950 မော်ဒယ် 954, FSX နှင့် Prepar3D v4 + (Rikoooo မှစမ်းသပ်သည်) အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ add-on အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး၏။ ရေးသားသူ Deane Baunton အားလှပသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အဆိုပါ ဖလက်ချာ အထူးသနယူးဇီလန်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးပျံ့နှံ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခံရဖို့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလေယာဉ်ကအရမ်းနိမ့်အမြင့်မှာပျံသန်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သငျသညျတုံ့ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ 40 မိုင်မှာပျံသန်းနိုင်သောကြောင့်, ရှိသမျှထွက် flaps ။ သငျသညျတခုစိတ်ကူးပေးဖို့, ဒီဒိုမိန်းအတွက်အထူးကု, အ Piper J3-ပြို, 35 မိုင်အကြောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီမံခန့်ခွဲ။
အဆိုပါ add-on အပြည့်အဝကာတွန်းနှင့်အလွန်အသေးစိတ်ကျသော virtual cockpits များအပါအ ၀ င်မော်ဒယ်လေးခုနှင့်အတူလက်တွေ့ကျပြီးအရည်အချင်းရှိသော 3D gauge များပါရှိသည်။ လေယာဉ်၏မော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏ကာတွန်းရုံစုံလင်သောများမှာ! အဆိုပါ liveries လေးမျိုးကွဲလာကြ၏။ ဤလေယာဉ်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုကသင်၏ Simulator ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်ရေးရေဒီယို (COMM1) သည်ရှေ့ထိုင်ခုံ၏ဘယ်ဘက်တွင်ရှိသည်။ မီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်သည်။
Author: Dean Baunton
Grob SPn Utility ကိုဂျက် FSX & P3D 3.1.3